ဇာတ်ဟန်ပါပါဖတ်ရှုတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေကို နားထောင်ပါ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်​ကျမ်းပိုဒ်​တွေကို အသံ​အထူး​ပြုလုပ်​ချက်​တွေ၊ မူရင်း​တေးသံ​နဲ့ ဇာတ်ကြောင်း​ပြန်​ပြောပြ​သူ​အသွင်​ဖြင့် ဖတ်ရှု​ထားတဲ့ အသံ​သွင်းထား​ရာတွေကို ကူးယူ၊ နားထောင်ပြီး မြင်ယောင်​ကြည့်ပါ။
ဘာသာစကား​ရွေးချယ်​တဲ့​အကွက်​မှာ ကြည့်​လို​တဲ့ ဘာသာစကားကို​ရွေး​ပြီး ရှာဖွေ ကို​နှိပ်​ကာ အဲဒီ​ဘာသာစကားနဲ့ တင်ထားတဲ့ နားဆင်​စ​ရာ ကျမ်းစာ ဇာတ်လမ်း​ရှိမရှိ ကြည့်​နိုင်ပါတယ်။ ရှာ​လို​တဲ့​ကျမ်းစာ​ဇာတ်လမ်းကို တွေ့​နိုင်ဖို့ ခေါင်းစဉ်​ပါ​စကားလုံး​တချို့ ဒါမှမဟုတ် ကျမ်းစာစောင်​နာမည်ကို ရိုက်နှိပ်​ပြီး ရှာယူ​နိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်း ရိုက်ထည့်ပါ/ရွေးချယ်ပါ အားလုံး “ငါသည် သေသည့်တိုင်အောင် ငါ့သမာဓိကိုမစွန့်လွှတ်” (ယောဘ ၁:၁-၂:၁၀; ဒံယေလ ၆:၁-၂၈) နောဧ—ယုံကြည်ခြင်း​ကြောင့် နာခံ ဘုရားသခင့် တရားစကားတော်ကို ကြားနာ၍ ကျင့်သုံးသူများ ဖြစ်ကြလော့ (လုကာ ၄:၁-၃၀။ ၃ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၇:၈-၂၄) မိမိလူမျိုးကို ယေဟောဝါ ကယ်တင် မျှော်လင့်ချက်ရှင်သန်စေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ယေဟောဝါ ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာ ဆက်ပြ ယေဟောဝါ ပဲ့ပြင်သောအခါ စိတ်မပျက်ပါနှင့်! (ယောန ၁:၄-၁၅; ၃:၁-၄:၁၁) ယေဟောဝါဘုရားဘက် ဘယ်သူရပ်တည်မလဲ ယေဟောဝါဟာ တစ်ဆူတည်းသော စစ်မှန်တဲ့ဘုရား ဖြစ်တယ် “ယေဟောဝါ​က ရွှင်လန်း​စေ” သက်သေများဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကို ခိုင်ခံ့စေပါ (မဿဲ ၂၇:၃၂-၂၈:၁၅။ လုကာ ၂၄:၈-၅၃) သစ္စာရှိပါ၊ ကြောက်စိတ်ကို အနိုင်ယူပါ (လုကာ ၅:၁-၁၁။ မဿဲ ၁၄:၂၃-၂၄။ မဿဲ ၂၆: ၃၁-၇၅) “သတ္တိရှိရှိနဲ့ စလုပ်ဆောင်ပေတော့” ‘အမှန်တရားကို သက်သေခံရန် ငါသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ’
၁၄ ထဲက ၁ - ၁၂ ပြထား
၁ ၂ ရှေ့သို့
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နောဧ—ယုံကြည်ခြင်း​ကြောင့် နာခံ
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နောဧ—ယုံကြည်ခြင်း​ကြောင့် နာခံ
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ နောဧ—ယုံကြည်ခြင်း​ကြောင့် နာခံ
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ “ယေဟောဝါ​က ရွှင်လန်း​စေ”
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ “ယေဟောဝါ​က ရွှင်လန်း​စေ”
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ “ယေဟောဝါ​က ရွှင်လန်း​စေ”
သက်သေများဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကို ခိုင်ခံ့စေပါ (မဿဲ ၂၇:၃၂-၂၈:၁၅။ လုကာ ၂၄:၈-၅၃)
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ သက်သေများဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကို ခိုင်ခံ့စေပါ (မဿဲ ၂၇:၃၂-၂၈:၁၅။ လုကာ ၂၄:၈-၅၃)
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ သက်သေများဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကို ခိုင်ခံ့စေပါ (မဿဲ ၂၇:၃၂-၂၈:၁၅။ လုကာ ၂၄:၈-၅၃)
သစ္စာရှိပါ၊ ကြောက်စိတ်ကို အနိုင်ယူပါ (လုကာ ၅:၁-၁၁။ မဿဲ ၁၄:၂၃-၂၄။ မဿဲ ၂၆: ၃၁-၇၅)
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ သစ္စာရှိပါ၊ ကြောက်စိတ်ကို အနိုင်ယူပါ (လုကာ ၅:၁-၁၁။ မဿဲ ၁၄:၂၃-၂၄။ မဿဲ ၂၆: ၃၁-၇၅)
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ သစ္စာရှိပါ၊ ကြောက်စိတ်ကို အနိုင်ယူပါ (လုကာ ၅:၁-၁၁။ မဿဲ ၁၄:၂၃-၂၄။ မဿဲ ၂၆: ၃၁-၇၅)
ယေဟောဝါ ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာ ဆက်ပြ
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ယေဟောဝါ ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာ ဆက်ပြ
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ယေဟောဝါ ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာ ဆက်ပြ
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ယေဟောဝါ ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာ ဆက်ပြ
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ “သတ္တိရှိရှိနဲ့ စလုပ်ဆောင်ပေတော့”
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ “သတ္တိရှိရှိနဲ့ စလုပ်ဆောင်ပေတော့”
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ “သတ္တိရှိရှိနဲ့ စလုပ်ဆောင်ပေတော့”
မိမိလူမျိုးကို ယေဟောဝါ ကယ်တင်
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ မိမိလူမျိုးကို ယေဟောဝါ ကယ်တင်
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ မိမိလူမျိုးကို ယေဟောဝါ ကယ်တင်
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ မိမိလူမျိုးကို ယေဟောဝါ ကယ်တင်
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ယေဟောဝါဘုရားဘက် ဘယ်သူရပ်တည်မလဲ
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ယေဟောဝါဘုရားဘက် ဘယ်သူရပ်တည်မလဲ
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ယေဟောဝါဘုရားဘက် ဘယ်သူရပ်တည်မလဲ
‘အမှန်တရားကို သက်သေခံရန် ငါသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ’
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ‘အမှန်တရားကို သက်သေခံရန် ငါသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ’
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ‘အမှန်တရားကို သက်သေခံရန် ငါသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ’
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ‘အမှန်တရားကို သက်သေခံရန် ငါသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ’
ယေဟောဝါဟာ တစ်ဆူတည်းသော စစ်မှန်တဲ့ဘုရား ဖြစ်တယ်
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ယေဟောဝါဟာ တစ်ဆူတည်းသော စစ်မှန်တဲ့ဘုရား ဖြစ်တယ်
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ယေဟောဝါဟာ တစ်ဆူတည်းသော စစ်မှန်တဲ့ဘုရား ဖြစ်တယ်
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ယေဟောဝါဟာ တစ်ဆူတည်းသော စစ်မှန်တဲ့ဘုရား ဖြစ်တယ်
မျှော်လင့်ချက်ရှင်သန်စေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ မျှော်လင့်ချက်ရှင်သန်စေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ မျှော်လင့်ချက်ရှင်သန်စေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ယေဟောဝါ ပဲ့ပြင်သောအခါ စိတ်မပျက်ပါနှင့်! (ယောန ၁:၄-၁၅; ၃:၁-၄:၁၁)
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ယေဟောဝါ ပဲ့ပြင်သောအခါ စိတ်မပျက်ပါနှင့်! (ယောန ၁:၄-၁၅; ၃:၁-၄:၁၁)
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ယေဟောဝါ ပဲ့ပြင်သောအခါ စိတ်မပျက်ပါနှင့်! (ယောန ၁:၄-၁၅; ၃:၁-၄:၁၁)